Posted on March 5, 2019 by Farm Nepal
अष्ट्रिचको उत्पती अफ्रिकामा भएको हो तर उड्न नसकने चरा प्रजातीले आफ्नो पद चिन्ह भारत र नेपालमापनि यस चरा पालन व्यवशाय प्रति पशुपंक्षि व्यवशायीहरुको बढदो चासो ले पुष्टी गर्दछ ।
अष्ट्रिच पालनमा लगानीको धेरै नाफा प्राप्त हुने संभावना देखिन्छ साथै लगानी उठने पनी । नेपालमा पहिलो पटक यस्को पालन उत्पादन अष्ट्रीच नेपाल प्रा.लि. ले शुरु गरेको छ । अष्ट्रिच राटाइटस प्रजातीको चरा मध्ये पर्दछ ।यसको मासु अण्डा बोसो तेल छाला तथा प्वाख अती मुल्यवान हुन्छन् ।
अष्ट्रिचको शरीरका प्रत्येक भागव्यापारीक दृष्टिकोणले मुल्यवानहुने हुदा यस्का पालन एउटा साहसी कदम त हुन्छ नै होला ।यस्का विभिन्न उत्पादनहरुको मुख्य विशेषताका कारण यो पेशा पनाउन आर्कषित गराउछ ।
अन्य पशुपंक्षिमा बेला बेला देखा पर्ने विविध खाले संक्रामक सरुवा तथा संर्पकित रोगका कारण विकल्पको रुपमा यस तर्फ आर्कषित हुन पुगोका छन् हाम्रो आफ्नै परिवेशमा पनि परिसथीती फरक छैन अष्ट्रीचको मासुमा वोसो न्युन १।५ प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ अरु खाले मासु सँग तुलना गर्दा यो गाढा रातो नरम तथा सुगन्धीत शिकार गरीने मृग जस्ता श्वादको हुन्छ जसबाट विविध खाले मासुका परिकार बनाउन सकिन्छ ।
यस्को मासुको सवाद थोरै समयम पकाउदा बढेर जान्छ बरु अन्य खाले मासु जस्तो गरी धेरै समय पकाये स्वाद खल्लो तथा मासु चामरो भएर जान्छ बढी प्रयोगमा ल्याइने मासुको लागी यस प्रजातीको भागहरु तीघ्राको मासपेशि तथा पिढयुको मासु पेशि मानीन्छ । छाती तथा मेरुदण्ड तथा घाटीको मासु हाड सहित हुने हुदा झोल हालेर सुप खान सकिन्छ । यसको मासु कोलेस्टेरोल मुक्त पनी हुन्छ ।
अष्ट्रिचले कुन उमेरसम्म उत्पादन दिन्छ ?
अष्ट्रिचबाट लगभग ३० देखि ४० बर्षम्म उत्पादन लिन सकिन्छ ।
अष्ट्रिचलाई के के खुवाउन सकिन्छ ?
अष्ट्रिचलाई अन्न दाना, हरियो घांस र सुख्खा घांस पनि खुवाउन सकिन्छ । दानासाथ सिपीको टुक्रा र साना ढुङ्गाको टुक्रा खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
भर्खरका चल्लाहरुलाई कस्तो दाना खुवाउनु पर्दछ ?
३ देखि ८ हप्ता उमेरका चल्लाहरुलाई स्टार्टर दानाको साथै हरियो बर्सिम घांस र साना ढुङ्गाको टुक्रा खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
बढ्ने उमेरका चल्लाहरुलाई चाहिं कस्तो दाना दिने ?
९ देखि ४२ हप्ता उमेरका चल्लाहरुलाई ग्रोवर दानाको साथै हरियो बर्सिम घांस र साना ढुङ्गाको टुक्रा खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
अनि ४२ हप्ता उमेर पछि कस्तो दाना खुवाउनु पर्दछ ?
अष्ट्रिचलाई ४२ हप्ता पछि फिनिसर दानाको साथै हरियो बर्सिम घांस र सिपीको टुक्रा र साना ढुङ्गाको टुक्रा खुवाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
अष्ट्रिचलाई दाना दिंदा कति दिने त ?
करिब १ बर्षको अष्ट्रिचलाई मकै, गहुं, चोकर आदि मिलाएर बनाएको दाना दैनिक ३ देखि ४ के.जी.सम्म खुवाउनु पर्दछ । घांसपात जस्तै बर्र्सिम, जोईण्ट भेच आदि १ देखि २ के.जी.खुवाउन सकिन्छ भने हरियो घांससंगै सुख्खा हे पनि मिसाएर खुवाउने गरेको पाईन्छ ।
अष्ट्रिचलाई पानी चाहिं कति खुवाउने नि ?
बयस्क अष्ट्रिचलाई दैनिक करिब ३ देखि ४ लिटरका दरले पानी दिनु पर्दछ ।
अष्ट्रिचलाई पनि रोग लाग्दछ ?
अष्ट्रिचलाई परजिवी, ढुसी, जिवाणु र विषाणुबाट विभिन्न रोग लाग्ने भएता पनि अष्ट्रिच आफैमा रोग सहन शक्ति बढी हुने भएकोले खासै रोगको समस्या देखिन्दैन ।
जैविक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कस्तो ठाउमा अष्ट्रिच फार्म स्थापना गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?
अष्ट्रिच फार्म स्थापनाको लागि मानिस बसेको बस्तीबाट कम्तिमा १०० मिटर र मुल सडकबाट कम्तिमा पनि २०० मिटर टाढा खुल्ला स्थान छनौट गर्नु पर्दछ ।
फार्ममा रोग भित्रिन नदिन अन्य के के कुरामा ध्यान दिनु पर्छ होला ?
फार्ममा काम गर्ने कामदारहरुको सरसफाईमा ध्यान दिने, जो सुकैलाई फार्ममा पस्न नदिने र फार्मको प्रवेशद्वारमा फुटवाथ राख्ने वा फार्म प्रवेश गर्दा निःसंक्रमणको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।